उत्कृष्ट मौसमको मौका छोप्दै एन.सी.एन.सी. को बार्बिक्यू भब्य रुपमा सम्पन्न, हजार भन्दा बढिको सहभागिता । - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > क्यानडा विशेष > उत्कृष्ट मौसमको मौका छोप्दै एन.सी.एन.सी. को बार्बिक्यू भब्य रुपमा सम्पन्न, हजार भन्दा बढिको सहभागिता ।
June 10, 2019 February 8, 2021 Raju Thapa498
नेपाली समूदायको सबै भन्दा पुरानो संथा एन.सी.एन.सी. ले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम अनुसार सबै नेपालीहरुको भेला गराई एकै ठाउंमा बसि खानपान लगायत मनोरन्जन गरि एक आपसमा भाईचारा, सद्भाव र Safe Testosterone Propionate dose Provado Juiz que prendeu Temer tem mais Test Prop do que cerebro भेटघाट गर्ने उद्धेस्य अनुरुप बार्बिक्यू कार्यक्रमको आयोजना गर्यो ।
यस बर्ष अघिल्लो बर्षहरुको दाजोंमा उल्लेख्य सहभागिता भएको पाईयो । करिब एकहजार भन्दा बढि संख्याको उपस्थिति भएको जानकारी एन.सी.एन.सी का कोशाध्यक्ष भूमि राज घिमिरेले जनाएका छन् । संथाले अपेक्षा गरेको भन्दा दोब्बर संख्याको उपस्थितिले खानेकुराको केहिबेर ब्यबस्थापनमा कठिनाई भएको थियो ।
कार्यक्रममा एनआरएनए क्यानडा लगायत जिटिए भित्र रहेका बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु लगायत क्यानडामा नव आगन्तुक र अभिभावकहरुको समेत उल्लेख्य सहभागिता देखिएको थियो ।
August 29, 2017 March 26, 2020 admin_user